संक्षिप्त मार्गनिर्देशन: तपाईंको घर जग्गा वेबसाइटलाई सफल बनाउँदै - रियल इस्टेट ब्लग - रियल्टी डब्ल्यूडब्ल्यू:
संक्षिप्त मार्गदर्शन: तपाईंको घर जग्गा वेबसाइटलाई सफल बनाउँदै
फेब्रुअरी 04, 2019 by माइक हेनेस, कुल अवलोकन:
एक घर जग्गा वेबसाइट मार्केट गर्न विभिन्न तरिकाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो लेख एक रियल एस्टेट वेबसाइट को मार्केटिंग को तरीका मा जानकारी प्रदान गर्दछ।
जब तपाइँसँग एक वेबसाइट छ, यसको मतलब यो होइन कि तपाइँ तपाइँको सेवाहरु लिन को लागी तपाइँको वेबसाइट मा ग्राहकहरु बगिरहेको पाउनुहुनेछ। एक वेबसाइट भएको साथै, तपाइँले यो निश्चित गर्नु पर्छ कि तपाइँले वेबसाईटलाई यस्तो बनाउनु भएको छ कि आगन्तुकहरू साइटमा रहनेछन् र उनीहरूले तपाइँका सेवाहरूको बारेमा ब्राउज गर्ने छन्। रियलटरहरूको लागि वेबसाइटहरू सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यहरूको आवश्यक पर्दछ। तपाइँको वेबसाइटले अधिक हेराई र आगन्तुकहरू प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने केही तरिकाहरू यहाँ छन्।
सामाजिक मिडिया विज्ञापन प्रयोग गर्दै
सामाजिक मिडिया विज्ञापनको विज्ञापन बिभिन्न तरीकाले क्रान्तिकारी भएको छ। धेरैजसो परम्परागत व्यवसायहरू जुन उपलब्ध सामाजिक मिडिया अवसरहरू अँगालेका छैनन् प्रत्येक दिन खस्कँदो छ। एक रियाल्टरको रूपमा, एक तरीकाले सुनिश्चित गर्नु तपाईं उत्तम बनाउनुभएको छ सामाजिक संजाल अनलाइन प्लेटफर्महरू मध्ये एउटा छनौट गरेर र प्लेटफर्म मार्फत तपाईंको वेबसाइट मार्केटिंगमा ध्यान केन्द्रित गर्दै हो।
तपाईंको व्यवसाय प्रबर्द्धनको उत्तम तरिका भनेको तपाईंले स्पष्ट हुनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्नु हो संचार तिनीहरुसँग। सामाजिक मिडिया पनि उपयुक्त स्थान हो जहाँ तपाईं बढि ग्राहकहरु लाई उत्पादनहरु किन्न को एक तरीका को रूप मा पदोन्नति गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै जसो सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू पनि यस्तो तरीकाले डिजाइन गरिएको छ कि उनीहरू ग्राहकहरु बीचको कुराकानी सजिलो होस्। उदाहरणका लागि, फेसबुकसँग च्याटबटहरू छन् जसले ग्राहकहरूलाई तपाईंबाट तुरून्त प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्दछन् तपाईं अनलाईन उपलब्ध नभए पनि।
खोज इञ्जिनहरू र SEO प्रयोग गर्दै
तपाईको साइटमा ट्राफिक प्राप्त गरेको छ भन्ने निश्चित गर्नका लागि सब भन्दा सजिलो तरीका मध्ये एक उपयुक्त SEO रणनीतिहरू प्रयोग गरेर हो। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको वेबसाइटमा जानकारी अनुक्रमित गर्न सकिन्छ ताकि तपाइँ तपाइँको वेबसाइट भ्रमण गर्ने अधिक व्यक्ति फेला पार्नुहुनेछ उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सेवाहरू खोजी गर्न।
यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइटमा सामग्री बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् तपाइँले रैंकिंग बढाउन केही कुञ्जी शव्दहरूमा आधारित सामग्री प्रदान गर्नुभएको छ।
प्रभावकारी एसईओ को संचालन को लागी कसैलाई आगन्तुकहरु को खोजी बानीहरु को ज्ञान को लागी आवश्यक छ जस्तै शब्दको प्रकार जुन तिनीहरु अनलाइन केहि खोजको बेला टाइप गर्छन्।
गुणवत्ता सामग्री उत्पादन गर्नुहोस्
बिभिन्न एसईओ रणनीतिहरू प्रयोग गर्नु बाहेक, तपाईंले निश्चित गर्नु पर्दछ कि तपाईंले गुणवत्तायुक्त सामग्री सिर्जना गर्नुभएको छ जुन आगन्तुकहरूलाई सँधै खोजी गर्न तपाईंको साइटमा फिर्ता आउँछ। यो अन्य साइटहरु बाट सन्दर्भ प्राप्त गर्न को लागी तपाइँको वेबसाइट बनाउने छ र तपाइँ आधिकारिक मानिने छ।
यदि तपाईंसँग रियल इस्टेट चित्रहरूको लागि वेबसाइट छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं यसमा सेक्शन थप्नुहुन्छ र यसलाई ब्लग कल गर्नुहोस्। सामग्री पोष्ट गर्नुहोस् जसले घरहरू खोजिरहेका मानिसहरूलाई तिनीहरू बस्न सक्ने मद्दत पुर्याउछ।
आगंतुकहरुलाई रजिष्टर गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्
अधिकांश व्यक्ति जो वेबसाइट भ्रमण गर्छन् उनीहरू दर्ता गर्न चाहँदैनन्। जहाँसम्म, एक व्यवसाय मालिक को रूप मा, तपाईं आफ्नो वेबसाइट मा ग्राहकहरु रजिस्टर बनाउन को लागी बिभिन्न तरीकाहरु को लागी खोज्नु पर्छ। साधारण दर्ता फारमहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन कठिन छैन।
तपाइँको ग्राहकहरु अनलाइन दर्ता तपाइँको व्यवसाय को लागी ग्राहक आधार निर्माण मा एक ठूलो भूमिका खेल्छ।
तपाइँको वेबसाइट को मार्केटिंग को माथिको तरीका मा प्रयोग गर्न सकिन्छ रियाल्टर्सहरूको लागि वेबसाइटहरू यातायात वृद्धि र अधिक ग्राहकहरु सम्म पुग्न।
माइक हेनेस फेब्रुअरी 4, 2019
यो प्रविष्टि मा पोस्ट रियल एस्टेट व्यवसाय र ट्याग रियाल्टर्सहरूको लागि वेबसाइटहरू। बुकमार्क को Permalink.
मार्च 3, 2017 W तरिका रियाल्टर्सले उनीहरूको ग्राहक आधार बृद्धि गर्न ब्लग प्रयोग गर्न सक्दछ Realtors एक काम छ कि धेरै आमने सामने कुराकानी को आवश्यकता छ। यो जहिले पनि एक व्यक्ति योग्य क्यारियर हो कि व्यक्तिमा धेरै व्यक्तिमा सीपको साथ निर्भर गर्दछ। होनि, तिनीहरू केवल आफ्नो छेउछाउको क्षेत्रमा काम गरेर धेरै मानिसहरूलाई पुग्न सक्छन्। आजको अनलाइन संसारमा असंख्य अरूहरूमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। एक ब्लग को उपयोग को माध्यम बाट, Realtors अन्ततः आफ्नो स्थानीय समुदाय मा आफ्नो छाप बनाउन र नयाँ ग्राहकहरु संग पहिले भन्दा कहीं सजिलो संग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। W तरिकाहरू […] पोस्ट रियल एस्टेट व्यवसाय
सेप्टेम्बर 29, 2016 कसरी साइनेजले तपाईंको व्यवसायलाई ब्रान्ड गर्न मद्दत गर्दछ व्यवसाय मालिकहरू जान्दछन् कि ग्राहकहरू आकर्षित गर्न सक्दैनन् यदि उनीहरूलाई थाहा छैन कि कम्पनी अवस्थित छ। त्यसकारण तिनीहरू उच्च ट्राफिक क्षेत्रहरूमा भवन भाँडामा लिन्छन् र निरन्तर विज्ञापनहरू ती क्षेत्रहरूमा जहाँ मानिसहरूले ती विज्ञापनहरू देख्दछन्। यद्यपि कम्पनीहरूले कम्पनीको सफलताको लागि कती उचित सही संकेतलाई बेवास्ता गर्न सक्दछन्। ब्रान्डि and र साइनेजको बीचको लिंकलाई हेरौं र केहि कारणहरू सूचीबद्ध गर्नुहोस् किन तपाईं सधैं आफ्नो व्यवसायको विज्ञापन गर्नुपर्दछ यद्यपि सम्भव छ। साइनेज ब्रान्डि Is […] पोस्ट रियल एस्टेट व्यवसाय
अक्टोबर 13, 2016 व्यापार रहस्यको लागि शीर्ष सामाजिक मार्केटिंग सामाजिक मिडिया साइटहरू मार्फत, व्यवसायहरू व्यक्तिगत अनुयायीहरूको साथ सम्पर्कमा रहन सक्दछन्। सामाजिक नेटवर्कलाई उनीहरूको मार्केटिंग रणनीतिको एकीकृत गर्नका लागि, तिनीहरूले मार्केटिंग मोडल विकास गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईंको कम्पनी पहिले नै सोशल मिडिया साइटहरूमा सक्रिय छैन भने, अब सुरू हुने समय भयो। जति सक्दो यो स्वचालित रूपमा तपाईले अरूलाई पोष्ट गर्नु ठीक छ, व्यवसायहरूले अझै पनी ग्राहकहरूलाई पछाडि केहि समय लिन आवश्यक पर्दछ, फल्स भन्छ। सामाजिक नेटवर्कि marketing मार्केटिंग राख्नु जस्तै छ […] पोस्ट रियल एस्टेट व्यवसाय
जुलाई 2, 2018 वाणिज्य घर जग्गा फोटोग्राफी गाइड वाणिज्य घर जग्गा फोटोग्राफी के हो? यो अन्य प्रकारका विज्ञापन फोटोग्राफीबाट कसरी भिन्न छ? यो कसरी यति ठूलो मांग र एक पटकमा जटिल हुन सक्छ? वाणिज्य घर जग्गा फोटोग्राफीका केही विशेष पक्षहरू, आवश्यक कागजातहरू, र केही वाणिज्य घर जग्गा फोटोग्राफी सल्लाहहरूको लागि ध्यान दिनुहोस् जुन यस क्षेत्रमा समृद्ध हुन मद्दत गर्दछ। रियाल्टरलाई केवल घरको शटहरू बाहिरी र आन्तरिकबाट यसलाई बेच्न आवश्यक पर्दैन। ऊ / उनीसँग […] पोस्ट रियल एस्टेट व्यवसाय
अगस्ट 24, 2017 ब्रिस्टलमा कसरी सर्वश्रेष्ठ घर जग्गा एजेन्टहरू भेट्टाउने सबै मानिस जो साधारण रियल ईस्टेट लेनदेन चाहान्छन् एक उत्तम उत्तम एजेन्ट हुनु पर्छ। तपाइँ एजेन्टको नाममात्र पैसा खर्च गरेर तपाइँको व्यवसायमा 80% आय बचत गर्न सक्नुहुनेछ, तर प्रश्न प्राय: जसो प्रश्न मानिसहरूले प्रतिस्पर्धी बजारमा एजेन्टको उत्तम फेला पार्ने बारेमा छ। सहि वकिल हुनु भनेको यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू पैसा कमाउनको लागि सब भन्दा ठूलो ब्रोकरेजमा काम गरिरहेका छन्। एजेन्टको परिभाषा जुन तपाईले खोज्नु भएको छ व्यावसायिक अनुभवमा झूट […] पोस्ट रियल एस्टेट व्यवसाय